Izaguga ziphathwe njengobukhosi | News24
Izaguga ziphathwe njengobukhosi
Izithombe:Makhosandile ZuluKwesokunxele, uWendy Mcambi ehlikihla izinyawo zikaBuyi Mchunu-Khanyile.
INHLANGANO yabesifazane bamabandla ahlukahlukene i-Sobantu Women’s Intercessory Prayer Group (SWIP) igubhe inyanga yabesifazane ngokuhlonipha abantu asebekhulile ngokubenzela usuku lwabo ngoLwesihlanu, ngomhlaka Agasti 18, lapho khona abakhonjiswe uthando ngezindlela ezahlukene.
Enye indlela izaguga zaseSobantu ezikhonjiswe ngayo uthando ukuthi amalungu alehlangano azihlikihle izinyawo kanye nemihlane aphinde azenzela ama-pedicure nama-manicure, ziqunywa izindzipho kanti lolu suku luphethe ngedili elinomsoco.
Okhulumela lenhlangano, uLindi Yeni uthe: “Sikhethe abantu asebekhulile abangahlali namalungu emindeni yabo. Siphinde sabaluleka ngokuthi kumele bedle kuphi ukudla futhi beziphathe kanjani ukuze bezogcina isimo sabo sempilo sikahle,” kusho yena.
Uthe zonke izaguga ebeziphethwe njengobukhosi ngalolu suku zithole iphakethe elinezipho ezahlukahlukene.
Uqhube wathi lenhlangano ihlose ukuthuthukisa izimpilo zemindeni kanye nabahlali baseSobantu ngokubafundisa ngobubi bezidakamizwa kanye nobugebengu.
“Kungekudala sithole isakhiwo ebesesingasetshenziswa sasilungisa sasesikhanda isikhungo sokulekelela imindeni ehlukumezekile,” kusho uYeni.
Uphethe ngokubonga ikhansela lendawo, uMnu. Sandile Dlamini ovule amasango ehholo lomphakathi ukuze lenhlangano izokwazi ukukhombisa izigagu uthando njengoba kuyinyanga yabesifazane.